के ढिलाइ गर्दैछ नेपालको पर्यटन बूम? - नेपाल भ्रमण समाचार
सुविधाहरू / अन्तर्वार्ता
के ढिलाइ गर्दैछ नेपालको पर्यटन बूम?
रौनब सिंह खत्री द्वारा
२०१ 2017 मा, नेपालले940 ,000०,००० आगन्तुकहरू देखे, जुन १ लाख पर्यटकहरूको लक्ष्य6प्रतिशतले हराएको थियो। यसै बीच, माउन्टमा आगन्तुकहरू सगरमाथा क्षेत्र पहिलो पटक ,000 ००,००० भन्दा परेको छ। तसर्थ यो वास्तवमै नेपालको लागि आशावादको समय हो, जसले विश्व बजारमा पर्यटक आकर्षण केन्द्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ। Million करोड जनसंख्या भएको देशका लागि, उल्लेखनीय रूपमा ठूला राज्यहरू – चीन र भारतको सीमामा छन् – पर्यटन प्रगतिको अवसर स्पष्ट छ।
परिप्रेक्ष्यमा: २०१ Chinese को जनवरी र फेब्रुअरीमा वसन्त महोत्सवको बिदामा चिनियाँले विदेश भ्रमणको संख्या करीव6लाख अनुमान गरिएको थियो। सन् २०१ 2017 को सम्पूर्ण पात्रो वर्षमा चीनका १० 10,,64 tourists पर्यटकले मात्र नेपालको भ्रमण गरे। यदि नेपालले वसन्त महोत्सवमा चिनियाँ पर्यटकको एक प्रतिशत पनि लोभ गर्न सक्थ्यो भने यो ठूलो बृद्धि हुनेछ। लोनली प्लेनेटलगायत धेरै यात्रा प्रकाशनहरूले जनवरी-फेब्रुअरीलाई नेपाल भ्रमण गर्ने राम्रो समयको रूपमा लिएका छन् विशेष गरी वन्यजन्तु अन्वेषण र धार्मिक यात्राका लागि। सम्भावना त्यहाँ छ, र यो नेपालको पर्यटन अधिकारीहरु लाई चिनियाँ आँखा पाउन को लागी ठूलो छुट्टी प्रवास को अवधि को लागी महत्वपूर्ण छ।
यस्तो उच्च लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई एक मजबूत पर्यटन विकास योजनाको आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा, क्षेत्रीय एयरपोर्टको विकासले “सबै आवश्यकताको आमा” गठन गर्दछ।
काठमाडौंमा हाल नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (त्रिभुवन एयरपोर्ट) छ। सीमित पूर्वाधारको साथ, एयरपोर्टले एक दिनमा १,4०० पर्यटकको औसत मात्र प्रक्रिया गर्छ। नेपाल एयरलाइन्सका लागि थप विमानहरू खरीद गर्ने सरकारको निर्णयले मात्र एयरपोर्टको बोझलाई बढाउँदछ। संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमका अनुसार यो देशलाई पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “राष्ट्रिय” एयरलाइन्स चाहिन्छ भन्नु गलत सोचेको “राष्ट्रवादी” हो। फिलिपिन्सको पलावानमा, उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारले चिनियाँ शहरबाट सीधा उडान सुरु गर्न चाइना एयरलाइन्ससँग सम्बन्ध स्थापित गरेको छ र यसको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथ यसले आफ्नो पुरानो एयरपोर्टमा33०,००० मात्र प्रति वर्ष १.9 मिलियन यात्रु समायोजन गर्न सक्छ। । यस प्रान्तले एयरपोर्टलाई दुई वर्ष भन्दा कम समयमा पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। त्यस्तै, क्यारेबियन र अफ्रिकी गन्तव्यहरू (रुवाण्डा जस्ता) वरिपरिका धेरै पर्यटन स्थलहरू राम्रो विमानस्थलहरूको माध्यमबाट विकसित भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको संख्या बढाउँदै।
हाल नेपालमा पोखरा र लुम्बिनीमा दुई ठूला एयरपोर्ट निर्माण परियोजनाहरू छन् जुन चीन र भारतको लगानीमा खर्च हुन्छ। यी विमानस्थलहरू पूरा भएपछि भारत र चीनबाट आएका पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण समारोहमा काम गर्नेछन्।
चीनको मामलामा, नेपालको पर्यटन ड्र नजिकैको प्रान्तहरूमा धेरै प्रतिस्पर्धी हुनेछ, तर यति धेरै कम, उडान र लागतको अवधिलाई देखाउँदै उत्तर प्रदेशमा। यी सीमावर्ती क्षेत्रहरूले नेपालका लागि अवसर प्रस्तुत गर्दछन्। अधिक पदोन्नति गतिविधिहरू तिब्बत, सिचुआन, वा युन्नान प्रान्तहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, जहाँ उडान अवधि र यात्राको लागि लागत कम छ। यस सम्बन्धमा लुम्बिनीले राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल (भगवान बुद्ध) ले २०१ 2017 मा १7 लाख पर्यटक देखे, १.२25 मिलियन नेपाल भित्रबाट आएका थिए र बाँकी प्रायः भारतीय सीमा पार भएका नजिकका शहरहरूबाट।
यदि नेपालले बेइजि or वा नयाँ दिल्लीसँग दर्जनौं पर्यटन सम्झौता र सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरे पनि वास्तविक अवसरहरू सीमानाको पार भइसकेका छन।
यसबाहेक, नयाँ क्षेत्रीय एयरपोर्टहरूले कम्पनीहरूको लागि चुम्बकको रूपमा काम गर्नेछ। काठमाडौंमा लक्जरी होटलहरू खुल्नुको एउटा कारण यो हो एयरपोर्ट पहुँचको कारण। यो प्रवृत्ति जताततै देख्न सकिन्छ: रोमानियाली इकोनॉमिक जर्नलको अनुसन्धानले देखाए कि जर्मनीको म्यूनिख एयरपोर्टको वरिपरि बसाई सरेको of१ प्रतिशत कम्पनीहरूले एयरपोर्ट पहुँचलाई आफ्नो स्थानको निर्णयको महत्वपूर्ण कारकको रूपमा देखाए। नयाँ क्षेत्रीय एयरपोर्टको साथसाथ पर्यटकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्दछ, किनकि यातायातले पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र उनीहरूको विशेष गन्तव्यहरूको नजिक ल्याउँदछ। लुम्बिनीको मामलामा, रहनको औसत लम्बाइ अविश्वसनीय 30 मिनेट हो। पर्यटकहरू सामान्यतया भारतीय सीमा पार गरेर लुम्बिनीमा प्रवेश गर्छन्, जुन फर्कनु अघि यस ठाउँको एक झलक मात्र प्रदान गर्दछ। यसैले विपन्न स्थानीयहरू लामो बसाईको फाइदा लिन असमर्थ छन्। क्षेत्रीय एयरपोर्टको साथ, पहुँचको सहजताले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दछ जो लामो समयसम्म रहन्छन् र हुनसक्छ नेपालबाट भारतको भ्रमण गर्छन्।
राजनीतिक इच्छाशक्ति विकासको केन्द्रबिन्दु हो। विश्वभरको सफल पर्यटन गन्तव्यहरूले विमानस्थलहरूको द्रुत निर्माण देखेका छन्। माथि उल्लेखित पोखराको मामलामा चीनको निर्यात-आयात बैंकले दुई बर्ष अघि यस परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गरे पनि निर्माण कार्य पूरा भएको छैन। गत गर्मीमा मात्र एउटा loanण २०१ 2016 मा सहमति जनाइएको थियो। अन्ततः यसले प्रभावकारी बनायो किनकि नेपालले वितरण सम्झौताको सर्तहरू पूरा गर्न केही समय लिएको थियो। त्यस्ता विषयहरूमा खुट्टा तान्ने, र मनमानी हवाईजहाज खरीदहरूले नेपालको सम्भावित पर्यटन बूमको प्रगतिलाई स्तम्भित गरिरहेछन्।
नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना सन् २०१६–२०२५
भ्रष्टाचार र वन्यजन्तु अपराधको बीचमा लिंकहरू
माउन्ट सगरमाथाको उचाई मापन
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि “ नाट्टा “ के भन्छ ?
COPYRIGHT © 2020 Nepal Tour News
अब आफ्नो यात्रा योजना!
नेपालमा तपाईंको बिदाको मजा लिनुहोस्
बाट इन्टर्नेरी सुझावहरू लिनुहोस्
सुंदर चीन: एकीकृत पर्यटन को वर्ष 2018